October 30, 2012 December 7, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
သူငယ်ချင်းရေ…. နင် ငါ့ကို မှတ်မိနိုင်ပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုရင် ဒီစာကို ရေးလိုက်တယ်… Continue reading →
September 15, 2012 August 16, 2013 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ကနေ့ အသင်းတော်တွေမှာ “ယုံကြည်သူ များရဲ့ ထာဝရ ကလေးဘ၀” လို့ ခေါ်ဆို နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံနေရ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသင်းတော် တွေမှာ အသင်းသားတွေ အများအပြား ရှိနေတာ ကတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Continue reading →
July 31, 2012 August 27, 2013 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
မိတ်ဆွေ…သင့်လက်ထဲမှာ ဘာရှိသလဲ? မိတ်ဆွေ ရဲ့လက်ထဲမှာ မရှိတဲ့အရာ (ငွေကြေးချမ်းသာ၊ အာဏာ) ထက်၊ ရှိတဲ့အရာ (ဘာမဆို) ကိုဘုရားသခင် အသုံးပြုချင်တယ်။ မောရှေ လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့အရာက တောင်ဝှေးကလေး တစ်ချောင်းသာဖြစ်တယ်။ Continue reading →
July 25, 2012 December 7, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
အို ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်ဟာ ကျွန်ုပ်နှင့် အတူ ရှိပါလျက်နဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ပြင်းပြတဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ခံစားနေရဒါလဲ.. ခရစ်တော် အတွက်သာ မဟုတ်ခဲ့ရင်…..
ဘုရားသခင်ကတိတော်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ အဖို့ ရှေ့အနာဂတ်သည် ထွန်းလင်းတောက်ပါနေသည်။ Continue reading →
July 17, 2012 December 7, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေကျွန်ုပ် တို့ အမိမြန်မာပြည်၏ ခရစ်ယာန် သာသနာသည် ယခုအခါ အနှစ်နှစ်ရာ နီးကပ်လာလေပြီ။ ခရစ်ယာန်ဘာ သာဝင် အသင်းသူ/သားတို့သည် လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ နှုက်ကပတ်တော်ကို သိသင့်သလောက် သိခဲ့ကြ လေပြီ။ Continue reading →
June 28, 2012 December 7, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
သန်းခေါင်အချိန်၌ ပေါလုနှင့် သိလတို့သည် ပဌနာပြု၍ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလျက် သီချင်းဆိုလေ၏။ ထောင်ထဲ မှာ နှောင်ဖွဲ့ခြင်း ကို ခံရသော သူတို့သည် နားထောင်ကြ၏။ ထိုခဏခြင်းတွင် မြေကြီး သည် ပြင်းစွာ လှုပ် သော ကြောင့် Continue reading →
June 27, 2012 March 24, 2013 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
သင်တို့သည် ဤလောက၏ အလင်း ဖြစ်ကြ၏။ တောင်ထိပ်၌ တည်သောမြို့ကို မကွယ်နိုင်။ ဆီမီးထွန်း၍ တောင်းဇလား အောက်၌ဖုံးထားလေ့မရှိ။ အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည် အလင်းကိုရစေခြင်းငှါ ဆီမီးခုံပေါ်မှာ တင်ထားလေ့ရှိ၏။ Continue reading →
May 15, 2012 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်နေသော အသင်းတော် လုပ်ငန်း၊ သာသနာလုပ်ငန်း (သို့) ဘုရားသခင်စေခိုင်းသော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း (သို့) ပရဟိတလုပ်ငန်း တစ်ခုခု အောင်မြင်ဖို့ရန် အတွက် အဓိက လျှို့ဝှက်ချက် တစ်ခုကား အဘယ်နည်း။ Continue reading →
April 26, 2012 August 23, 2013 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
မကြာသေးခင်က ကြည့်လိုက်ရတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ The Girl with the Dragon Tattoo ပါပဲ။ Continue reading →
April 22, 2012 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
မေး။ ။ အသင်းတော်လား (သို့မဟုတ်) မှားယွင်းသောအယူဝါဒရှိသည့် အစွန်းရောက် အဖွဲ့အစည်းလား။ ဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်မလဲ။ Continue reading →
April 12, 2012 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ခရစ်တော်နောက်သို့လိုက်သည့် တပည့်တော်တိုင်း နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်စရာ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ Continue reading →
March 12, 2012 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
စိတ်နှလုံးကို လုံးဝဥဿုံ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလျက် မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ကာ အသူရာ ချောက်ကမ်း ပါးထဲသို့ ခြေစုံပစ်၍ ခုန်ချပစ်လိုက်သည်။ အား——နေရာကား ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၊ ပစ္စိဖိတ်ကမ်းခြေတနေရာ Continue reading →
December 6, 2011 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမား တစ်ဦး။ ဗိုလ်လုပွဲတွင် ရှုံးသောအခါ မျက်ရည်တွေတွေကျပုံကို တီဗွီဖန်သားပြင်တွင် တွေ့ခဲ့ရ၏။ ရုပ်ရှင် မင်းသမီးတစ်ဦး။ ဇာတ်ကားအတွင်းမဟုတ်ဘဲ၊ အပြင်တွင်တကယ် မျက်ရည်ကျသည်ကို Continue reading →
November 17, 2011 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
မောင်စောမင်းထက် ကိုယ်တိုင် မေးမြန်းခံရပြီး ကျွန်တော်ကို ထပ်မံမေးမြန်းတဲ့မေးခွန်းကို ကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက် ဖြေကြား ပေးပါမယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဒီမေးခွန်းတွေဟာ Continue reading →
September 13, 2011 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့ယုံကြည်ရာဘာသာတရားကို လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်၍ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိ သော လူ့အဖွဲ့စည်းတွင် ယနေ့ အသက်ရှင်နေထိုင်ရသူများဖြစ်သည်။ Continue reading →
June 18, 2011 June 17, 2013 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ မစ္စဂျွန်ဘရု(စ်)ဒေါ့(ဒ်) Mrs.John Bruce Dodd သည်မိခင်များကို မေလဒုတိယအပတ်တွင် မိခင်များနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဂုဏ်ပြုသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် ဖခင်များကိုလည်း Continue reading →
June 17, 2011 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
(ဂ) ကျင့်ကြံခြင်း (Ethics) များဖြစ်ပါသည်။ Continue reading →
June 7, 2011 December 21, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
မည်သည့်အတွက်ကြောင့် အပြစ်ပြုမိသည်ကို စုံစမ်းပြီး သိရန်ကြိုးစားပါ။ Continue reading →